Digniin Arday: ku saabsan cabitaannada tamarta (energy drink) – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Digniin Arday: ku saabsan cabitaannada tamarta (energy drink)
Digniin Arday: ku saabsan cabitaannada tamarta (energy drink)
Ardayda da’yarta ah ayaa si sii kordheysa u weecanaya cabitaannada tamarta ee dalal badan oo adduunka ah iyagoo dadaal ugu jira sidii ay u kordhin lahaayeen feejignaanta iyo ka takhalusidda daalka, laakiin khubarada caafimaadku waxay ka digayaan tallaabadaas.
Sida lagu sheegay daraasad lagu sameeyay Koonfurta Kuuriya, 50.6 boqolkiiba ardayda dugsiga sare ee cabta cabitaanka tamarta, waxay xaqiijiyeen inay leeyihiin waxyeelo ay ka mid yihiin hurdo la’aanta iyo tachycardia.
Daraasaddan, oo uu sameeyay cilmi baadhe ka tirsan jaamacadda Kamyeong, Oh Yoon Jung, waxaa ku jira 245 ardayda dugsiga sare ah, iyo boqolkiiba 79.5 jawaabeyaasha waxay xaqiijiyeen inay cuneen cabitaannada tamarta.
Ardayda qaar waxay jecelyihiin inay cabaan cabitaano tamarta ah, si ay uga takhalusaan daalka ay sababaan feejignaanta fasalada, gaar ahaan maadaama nidaamka iskuulka ee Aasiya uu ubaahanyahay joogitaanka saacado dheer fasalka gudahiisa.
Natiijooyinka ayaa muujinaya in haweenka ay saameeyaan caafimaad badan marka loo eego tamar cabista, sida uu qoray wargeyska “Chosun Elbo”.
Cilmi-baare ka tirsan Jaamacadda Gashun, Seo Hee-san, ayaa u sababeeyey cilado-caafimaadyadan in ay gaarsiisan yihiin maskaxda maskaxda oo aan dhameystirneyn, culeyskuna uu ka fudud yahay marka loo eego dadka waaweyn.
Tani waxay ka dhigeysaa jirka dhallinta mid aad u saameysa, wuxuu yidhi, markii uu si xoog ah u helo kafeeyn ka cabbo tamarta, ka dibna ay u badan tahay inuu ku noqdo balwad.
Baaraha ayaa intaa ku daray in cabitaankani uu u shaqeynayo inuu nasto ardayga, muddo gaaban, laakiin si dhakhso ah ugu soo laabto daal, taas oo micnaheedu yahay raadinta tamarta ku jirta “weelasha cabitaanada tamarta” caanka ah maaha xalku.
Gobollada qaar waxay mamnuuc ka iibinta cabitaannada tamarta dadka ka yar da’da 18, laakiin sheyga ayaa laga heli kara meelwalba da ‘kasta oo South Korea ah ay helikaraan
Previous articleXisbiga Ugu Weyn Dalka Sweden oo Xiisaynaya Qadiyadda Somaliland
Next articleDowladda Itoobiya oo Boqolaal Qof u xirtay rabshadihii dhowaan Dalkaasi ka dhacay
Warbixintii ugu danbeysay Covid19 Soomaaliland
Corona oo ku sii faafaysaa adduunka .. wararkii ugu danbeeyey iyo...